माेटी धाइ र गरिब युवक | manka kura
« मेरो ऐतिहासिक सहर कीर्तिपुर
उतिवेलाका डाक्टर चिन्यामान »
माेटी धाइ र गरिब युवक
मोटी धाई र गरिब युवक
गुई डी मोपासाँ
रेल जेनेआ पार भयो ।अनि,चटृानै चटृानले भरिएको समुद्री किनार हुँदै, समुद्र र पहाडका बीचमा सर्पजस्तै घर्सदै, किनारमा पहेलो बालुवा र चाँदीजस्तो मसिना छालहरुमा घच्याकघुचुक गर्दै, सुरुङको कालो ओडारमा छिर्दै मार्सेइतिर हान्नियो ।
रेलको अन्तिम डिब्बामा एउटी मोटी युवती र एक युवक नबोलीकन ,यदाकदा एकले अर्कालाई हेर्दै आमने सामने बसिरहेका थिए । अन्दाजी २५ वर्षको युवती ढोकानिर बसेर बाहिरको दृश्य हेरिरहेकी थिई । पिडमोन्टवासी हटृाकटृा यो महिला किसानका आँखा काला, स्तन धेरै ठूला, गाला पुक्क परेका थिए । काठको बेन्चमुनि उस ले थुप्रै सामान राखेकी थिई । काखमा केवल एउटा बास्केट थियो ।
सँगैको युवक करिब २० वर्षको थियो । टन्टलापुर घाममा खेतमा काम गर्ने युवक दुब्लो ,शरीरमा रगत नभएजस्तो पहेलो र अँध्यारो अनुहारको थियो । उसको नजिक एउटा रुमाल थियो । अनि थियो उसको सारा भाग्यःएक जोर जुत्ता, एउटा बुसर्ट, प्यान्ट र ज्याकेट बेन्चमुनि केही छोपेर राखिएको थियो ःडोरीले बाँधेको एउटा साबेल र पिक । काम खोज्न उ फ्रान्स जाँदै थियो ।
सूर्यले समुद्री किनारमा आगोको वर्षा गरायो । यो, मे महिनाको अन्तिमतिरको समय थियो । डिब्बाका झ्यालहरु खुला थिए, जहाँबाट मिठो बास्ना छिरिरहेको थियो । फूल फुलिरहेको सुन्तला र कागतीका बोटहरु खुवै मीठो, गाढा र झकझकाउँदो गरी शान्त आकाशमा मीठो सुगन्धको श्वास फालिरहेको थिए । यदाकदा तिनमा गुलाबको सुगन्ध मिसिन्थ्यो, जुन बाटोमा वा साना घरबाहिरका हरियाली बगैँचा र गाउँघरतिरका झारहरुजस्तै जताततै शान्त रहन्थे ।
गुलाबहरु यी किनारहरुमा निकै सुविधाजनक अवस्थामा थिए । हल्का तर शक्तिशाली गाढा सुगन्धका साथ ’emले मानौ यहाँ आफनै देश अनुभूति गर्न पाएका थिए । हावालाई नै ’emले उपचार गरिदिएका थिए र कुनै मीठो रक्सीभन्दा स्वादिलो र उत्तेजक बनाइदिएका थिए । रेल बिस्तारै हिँडिरहेको थियो ।
मानौँ बगैँचाको मीठो सौन्दर्यमा ऊ पनि अलमलिइरहन चाहन्थ्यो । सेता घरहरु भएका साना बिसौनीहरुमा कुनै पनि समय रोकिन सक्थ्यो । लामो सिट्ठी बजाउँदै रेलले फेरि शान्त पाइला चाल्न थाल्यो । यतातिर कोही चढिरहेको थिएन । लाग्थ्यो, संसार निदाइरहेको छ र वसन्तको यो तातो बिहानीमा अगाडि बढ्ने’bout कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।
मोटी आइमाई बेलाबेला आँखा वन्द गर्थी । अकस्मात् फेरि खोल्थी, जब उसको काखको बास्केट चिप्लेर तल झथ्र्यो । ऊ त्यसलाई तत्काल सम्हाल्थी केही मिनेट बाहिरतिर नियाल्थी र फेरि झकाइहाल्थी । उसको निधारमा पसिनाका थोपाहरु चम्किरहेका थिए । उ अप्ठेरोसँग सास फेरिरहेकी थिई, मानौ भर्खरै उसको कुनै गम्भीर अपरेसन भएको थियो ।
युवकचांहि टाउको दो’boutर किसानलाई लाग्ने मस्त निद्रामा थियो ।
सानो बिसौनी आउनै लाग्दा मोटी आइमाई बिउँझिई । उसले बास्केटबाट एक टुक्रा रोटी,उसिनेका अन्डाहरु, एक सिसी वाइन, राता आलुबखडाहरु निकाली र खान थाली । युवक पनि एक्कासि बिउँििझयो । प्रत्येक गाँसमा ऊ मोटीलाई घुँडादेखि मुखसम्म घुरेर हेरिरहेको थियो । उसका पाखुरा बन्द थिए। घुरिरहेका आँखा, खाल्डो परेका गाला र बन्द ओठ ।
कुनै भयंकर लोभी आइमाई जस्तै उ खाइरहेकी थिई । कुनै पनि समय उ मुखभरि वाइन राख्थी र अन्डा निल्थी । सास फेर्न एक छिन रोकिन्थ्यो । उसले रोटी, अन्डा, आलुबखडा र वाइन सबै एकैछिनमा सफाचट पारी । आइमाईले खाइसकेपछि युवकले आँखा चिम्लियो ।
अलि अप्ठेरो भएपछि आइमाईले चोलीको तुना खुकुलो पारी । युवकले फेरि उसलाई हे¥यो । उसले चोली खोल्र्द गई । उसका स्तनको दबाबले लुगाका दुई पाटाको बीच फराकिलो हुँदै गएको सेतो कपडा र छाला देखियो ।
अलि सजिलो भएपछि आइमाईले इटालियाली भाषामा भनी, कति मात्रै गर्मी भ’को हो, सास फेर्ने नसकिने ।’
युवकले पनि उही भाषा र उस्तै उच्चारण गर्दै जवाफ दियो, ‘यात्राका लागि यो निकै राम्रो मौसम हो ।’.
‘तपाईँको घर पिडमोन्ट हो ?’ उसले सोधी ।
‘अस्तेँ हो ।’
‘मेरोचाँहि क्यासाले ।’
ती दुवै छिमेकी गाउँ थिए ।
उनीहरु कुरा गर्न थाले ।
उनीहरुले सर्वसाधारणले गर्ने उही अति साधारण कुरा दोहो¥याए, जुन व्यापक क्षितिज नभएको सुस्त मनका लागि काफी थियो । ’emले गाउँको ’bout कुरा गरे । परिचय आदानप्रदान गरे ।
उनीहरुले केही व्यक्तिको नाम लिए, जसलाई दुवैले चिनेका थिए । उनीहरुका मुखबाट अन्त्यतिरको विशेष ध्वनि मिसिएका इटालिएन शब्दहरु छिटो र हतारहतार निस्किरहेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले आफनै’bout कुरा गरे ।
मोटीको विवाह भइसकेको थियो । मार्सेईमा एउटी असल महिलाकाहाँ धाई आमाको काम गर्न उसले आफना तीन बच्चा दिदीकहाँ छाडेकी थिई ।
युवक कामको खोजीमा थियो । मार्सेईमा नयाँ घरहरु बनिरहेकाले काम पाइन्छ भन्ने उसले सुनेको थियो ।
त्यसपछि उनीहरु मौन भए ।
डिब्बाको छानामा पानी बर्सेजस्तो गर्मी डरलाग्दो गरी बढेको थियो । रेलको पछिपछि घुमिरहेको एक मुस्लो धुलोभित्र पसिरहेको थियो । सुन्तला र गुलाबको मीठो सुगन्ध अझै गाढा भइरहेको थियो ।
दुवै जना फेरि निदाए ।
दुवैले एकसाथ आँखा खोले । समुद्रको नीलो पानीमाथि प्रकाशको झरना बर्साउँदै सूर्य डुब्दै थियो । हावा शीतल र शान्त थियो । चोली खुकुलो पार्दै, आँखा लोलो बनाउँदै गाला समाएर धाईले निराश स्वरमा भनी,‘ हिजोदेखि मैले बच्चालाई दूध खुवाएकी छैन । रिँगटा लागिरहेछ । म त मुच्र्छा पर्छु होला ।’
जवाफ पहिल्याउन नसकेर युवक केही बोलेन ।
उसले भनी, ‘दूध गानिएको आइमाईले दिनमा कम्तीमा तीनपटक बच्चालाई दूध ख्वाउनुपर्छ । नभए हात्तीलाई ज्वरो आएजस्तै असाध्यै गाह्रो हुन्छ । यो मेरो मुटुमा भारी भइरहेछ । सास फेर्नै मुस्किल पारिरहेछ र सारा अंग चल्दै नचल्ने बनाइरहेछ । यति धेरै दूध हुनु पनि खराब नै हो ।’
‘हो, यो अप्ठेरो स्थिति हो । तपाईलाई धेरै गाह्रो भएजस्तो छ’, युवकले भन्यो ।
मोटी बिरामीजस्तै थकित र कमजोर देखिई । ऊ भुनभुनाई, ‘अलिकति थिच्नासाथ मेरो स्तनको टुप्पाबाट दूधको झरना बग्न थाल्छ । अचम्मै हुन्छ । तपाईलाई विश्वास नलाग्ला , यस्तो हेर्न मकहाँ छिमेकीहरुको ताँती लाग्थ्यो ।’
‘ए हो र ?’
‘साँच्चै हो । तपाईलाई देखाउन कुनै अप्ठेरो थिएन । तर, त्यसको कुनै अर्थ छै ।’
ऊ चुप लागी । एउटा समूह कुनै बिसौनीमा ओर्लियो । ढोकानिर महिलाको काखमा रोइरहेकी अत्यन्त दुब्ली बच्ची थिई । धाईले उसलाई हेरी ।
उसले करुणापूर्ण आवाजमा भनी,‘म त्यो बच्चीलाई दूध खुवाएर शान्त पार्न सक्थेँ । त्यसले मलाई पनि हल्का हुन्थ्यो । म धनी होइन । कामकै लागि मैले आफन्त र सानो बच्चासमेत छाडेर आएकी हुँ । तैपनि त्यो बच्चालाई दूध चुसाउन पाए म पाँच फ्रांक दिने थिएँ । यसले हामी दुवैलाई सान्त्वना प्रदान गथ्र्यो । मैले त नयाँ जीवन नै पाउने थिएँ ।’
ऊ फेरि मौन भई । भतभती पोलिरहेको निधारमा ऊ बारम्बार हात राख्थी, जहाँबाट पसिना छुटिरहेको थियो । कन्दै उसले भनी, ‘मेरो आमा, अब सहन सक्दिनँ । मलाई कालले टिप्छजस्तो छ ।’
बेहोशीमा इशारा गर्दै उसले आफना लुगाहरु खोली । खैरो मुन्टोसहित उसको कसिएको ठूलो दाहिने स्तन ह्वालांग देखियो । कन्दै उसले भनी, ‘हे भगवान्, म के गरुँ ? अब म के गरुँ?’
रेल फेरि बास्ना फैलाइरहेका रुखहरुको बाटो हुँदै चल्न थाल्यो । यदाकदा समुद ्री किनारमा निदाइरहेको माछा मार्ने डुंगा देखिन्थ्यो । पानीमा देखिने त्यसको सेता छायाँ देख्दा यस्तो लाग्थ्यो , त्यहाँ तल अर्को पनि डुंगा छ ।
रनभुल्ल परेको युवकले भकभकाउँदै भन्यो, ‘म्याडम,म तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छु होला।’
भत्किएको स्वरमा धाईले भनी, ’हो तपाईले चाहे मलाई नयाँ जीवन दिन सक्नुहुन्छ । ओहो हो, म मर्दैछु, मर्दैछु प्रभु।’
ऊ घुँडा मारेर धाईको अगाडि बस्यो । धाई उपटिृ ढल्किई । बच्चालाई जस्तै अँध्यारो रंङको स्तनको टुप्पो उसको मुखमा राखिदिई । जब मुखमा अड्याउन धाईले आफनो स्तन दुवै हातले समाई,दूधको एक थोप बाहिर निस्कियो ।
युवकले भोको बालकझैँ उत्साहपूर्वक दूध चुसिरह्यो । मानौँ धाईको भारी स्तन कुनै फल थियो । उसले आफना दुवै पाखुरा मोटी धाईको कम्मरमा बेरेको थियो । बच्चाले जस्तै गर्धनको चालमा कहिले उ विस्तारै चुस्थ्यो । कहिले छिटो छिटो ।
धाइले भनी,‘यतातिर सन्चो भयो , अब अर्कोतिर आज्ञाकारी भएर उसले अर्कोतर्फ चुस्यो ।
धाईले युवकको पिठ्यूँमा दुवै हात राखेकी थिई । डिब्बाभित्र छिरेको फूलको मीठो सुगन्ध मिसिएको हावाको झोक्कासँगै ऊ खुसी र आनन्दसाथ गहिरो सास लिइरहेकी थिई ।
‘कति मीठो सुगन्ध छ यतातिर’,उसले भनी ।
उसले जवाफ दिएन । बच्चाझै आँखा चिम्लिएर दूध चुसिरह्यो ।
धाईले बिस्तारै उसलाई धकेली । ‘पुग्यो । बल्ल सन्चो भयो । म त मरिसकेको थिएँ, फेरि बाँचे।’
हातको पछिल्लो भागले ओठमा लागेको दूध पुछ्दै युवक उठ्यो । चोलोभित्र आफना दुवै स्तन छोपेपछि धाईले भनी, ‘तपाईले मलाई ठूलो गुन लगाउनुभयो महोदय,धेरैधेरै धन्यवाद ।’
अनुग्रहित भाकामा युवकले भन्यो ,‘धन्यवाद त मैले तपाईलाई दिनुपर्छ महोदया । खासमा, दुई दिनदेखि मैले केही खान पाएको थिइनँ ।’
(कुनै युवकले युवतीको स्तनपान गरेको वर्णन झटृ सुन्दा हामीलाई अश्लील लाग्छ । तर फ्रान्सका महान् कथाकार मोपासाँको यस कथामा त्यसको असाधारण मानवीय अर्थ छ । यो कथा भारतको रोबिन बुक्सद्धारा प्रकाशित तथा भार्सेन स्टेरीद्धारा फ्रान्सेलीबाट अंग्रेजीमा अनूदित सेलेक्टेड सर्ट स्टोरिज को ‘आइडिल’ कथाको अनुवाद हो । अनुवादकः अभय श्रेष्ठ ।
धेरै पछि ब्लगमित्रहरुसँग यही कथाको टांसोसंगै भेटघाट गर्दैछु । जय व्लग ।
This entry was posted on जुन 30, 2019 at 10:36 बिहान and is filed under वर्गविहीन.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.